Game (War Craft III) ကို ဘယ်လို Install လုပ်မလဲ... - MYSTERY ZILLION
Game (War Craft III) ကို ဘယ်လို Install လုပ်မလဲ...
War Craft III ကို Install လုပ်ပြီးရင် ခွေ တောင်းနေတယ်........
ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ခွေမတောင်းအောင်လို့.............
နောက်ပြီး မြေပုံလေး များလည်း Share ကြပါဦး...........လူဆိုးလေးနဲ့ ခုတ်ချင်လို့ပါ.........
နောက်ထပ် ခဏခဏ တောင်းနေရတဲ့ Freedom Software လေးများပေးသနားကြပါ.........:77:
မြေပုံကို Internet ထဲကနေဆွဲပြီး ထည့်ပြီးသွားပြီ.........
ဒါပေမယ့် ကစားလို့မရဘူးဗျာ......... ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ...........:39:
မြေပုံကို ထည့်ပြီး သူ့ကို hilight ထောက်လိုက်ရင် အောက်မှာ ဘာမှ မပေါ်လာဘူး........:14:
အမှန်ဆိုရင် team 1 & team2ရွေးလို့ရရမှာလေ...........:67:
တစ်ယောက်တည်း ဆော့မယ်ဆိုပြန်တော့လည်း မရပြန်ဘူး.............:14:
အစ်ကို crack ကူးရမယ်ထင်တယ်နော်။ (အထင်ကိုပြောတာပါ)
Crack ကူးထည့်ရမယ်ထင်တယ်ဗျ။ အဲဒါကြောင့် CD တောင်းနေတာပါ။
ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ... စ Install လုပ်ကတည်းက Full Install မဟုတ်ပဲ သွင်းထားလို့ဖြစ်မှာပါ။
မှန်ပါတယ်ဗျာ ... cd မှာပါတဲ့ crack file ကို installation လုပ်ထားတဲ့ source folder မှာ paste လုပ်လိုက်ပါ ... file ကရှိပြီးသားလို့ပြောရင် yes သာနှိိပ်... overwrite လုပ်သွားလိမ့်မယ်
ဒါဆို OK ပြီ.. :103: Latest Map တွေရော AI Map တွေရောကို www.getdota.com မှာ Free ဒေါင်းလို့ရပါတယ်ဗျာ..
ဒါပေမယ့် မြေပုံထည့်လည်း လူဆိုးနဲ့ ခုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်.............(တစ်ယောက်တည်း လည်း ခုတ်လို့မရပါဘူး..............)
အခု နောက်ဆုံးမြေပုံထည့်ထားတယ်(6.57b) .....................
ဒါပေမယ့် start လုပ်လို့မရဘူး...............
လုပ်ကြပါဦး ..................... ခုတ်ချင်လွန်းလို့ပါ....................:77:
warcraft version နဲ့map version မတူတာများလား
ဟာ .. အကိုကလည်း AI Map နဲ့ဆော့မှလူဆိုးဆိုတဲ့အကောင်တွေထည့်လို့ရမှာပေါ့ ...ဥပမာ. 6.57b AI လို့ name ပေးထားတဲ့ map တွေပဲလုပ်လို့ရတာ ... AI ဆိုတာမပါရင်သူငယ်ချင်းတွေ LAN ချိတ်ပြီးဆော့တာပဲရတယ် ... အပေါ်မှာ ကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ လင့်မှာလွယ်လွယ်ဒေါင်းလို့ ရပါတယ်ခင်ဗျာhttp://www.getdota.com/ai_maps မှာ latest AI Map ရှိတယ်ဗျို့့...
ကျေး ဇူးညီလေးရေ.........စမ်းလိုက်ဦးမယ်..............အကို့ game က တစ်ယောက်ထဲကို ခုတ်လို့ မရဖြစ်နေတာ.........start game နှိပ်လိုက်ရင် loading လာရမယ်လေ..........
loading ကို မလာဘူးဖြစ်နေတယ်..........ညီလေးပေးတဲ့ လင့်ကလေ ဒေါင်းပြီး လုပ်ကြည့်ဦးမယ်..... အဆင်မပြေရင် ထပ်ပြောမယ်နော်.............. အရမး်ကို ခုတ်ချင် ထစ်ချင် နေလို့..........ဟဲဟဲ.............(ကိုနဲ့ မတည့်တဲ့ လူတွေအမှတ်နဲ့ - ယောက်္ဖ၊ ယောက္ခမ၊ စသည်ဖြင့် ပေါ့)
အဲဒါ version update မလုပ်ရသေးတာထင်တယ်..
အဲဒီမှာ အပ်ဒိတ် ဒေါင်းပီး အင်စတောလုပ်လိုက်...
အကောင်းဆုံးကတော့ ဒိုတာ ဆော့လို့အိုကေနေတဲ့ ဂိမ်းဆိုင် က WarcraftIII folder တစ်ခုလုံးသာ
USB Stick ထဲထည့်ခဲ့ (or) DVD ခုတ်ခဲ့လိုက်ဗျာ..:65:
2G stick နဲ့ဆို အေးဆေးကူးလို့ရတာပဲ..:)
ပီးရင် ကိုယ့်စက်ထဲ copy ကူး... FrozenThrone.exe ကို desktop shortcut ထုတ်..
version update တော့လုပ်ထားတယ်......... အစကနေပြောပြမယ်နော်.........
ပထမ War Craft III ကို Install လုပ်တယ်.......... Craft ဖိုင်တွေလည်း ကူးထည့်လိုက်တယ်...... နောက်တစ်ဆင့် War Craft III required (or) Frozen Throne ကို ထပ်ထည့်လိုက်တယ်............ Craft ဖိုင်တွေလည်း ထပ်ကူးထည့်လိုက်တယ် ...(အခွေ မတောင်းတော့ဘူး.........) နောက် မြေပုံတွေကို Internet ထဲကနေ ဒေါင်းပြီး War Craft III ထဲက Maps ထဲကို ထည့်လိုက်တယ်.........
တခြားမြေပုံတွေက ကစားလို့ ရတယ်.........Dota ပဲ ခုတ်လို့ မရတာ......... ဇာတ်လမ်းဆော့လို့ရတယ်.............. ကျွန်တော် တော် တော် အုံးစားလာပြီဗျာ............
@|[email protected] ပြောသလိုမျိုး Memory Stick နဲ့ ပြေးရတော့မယ်ထင်တယ်..........:((:((:((:((
version လေးတစ်ခုလိုနေတာပါ............ အဆင်ပြေသွားပါပြီ ခင်ဗျား..........အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါတယ်.........
Social Group ထဲမှာလည်း War Craft နဲ့ ပါတ်သက်လို့ Group လေး တစ်ခု တည်ထောင်ထားပါတယ် ........
စိတ်၀င်စားသူများ ၀င်ရောက် ဆွေးနွေး အကြံပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား.........